कार्यक्षेत्र नछोड्न जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचन आयोगको आग्रह स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई तत्काल आफ्नो कार्यक्षेत्र नछोड्न निर्वाचन आयोगले आग्रह गरेको छ।
७५२ पालिकाको नतीजा आयो, कुन पार्टीबाट कति जनप्रतिनिधि निर्वाचित (सूची) स्थानीय तह निर्वाचनबाट ७५२ पालिकामा ३५ हजार ४५ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्।
कार्यपालिका र जिससमा पनि तालमेल गर्न गठबन्धनको निर्देशन सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनले स्थानीय तहको कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समिति गठनमा पनि तालमेल गर्न निर्देशन दिएको छ।
त्रियुगाको मेयरमा कांग्रेसका वसन्त बस्नेत निर्वाचित उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार वसन्त बस्नेत निर्वाचित भएका छन्।
त्रियुगा नगरपालिकाको मेयरमा कांग्रेस र उपमेयरमा एमालेलाई अग्रता उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कांग्रेसका वसन्तकुमार बस्नेत जित नजिक पुगेका छन्।
एमाले र माओवादीले अघिल्लो पटकभन्दा कम जनप्रतिनिधि जिते स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले २०७४ को निर्वाचनमा भन्दा कम जनप्रतिनिधि जितेका छन्।
त्रियुगामा ३३ हजार मतगणना, कसको कति? उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाको मतगणना अन्तिमतिर पुग्दा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार वसन्त बस्नेतले झण्डै दुई हजारको अग्रता कायम गरेका छन्।
आठ सूर्य, ६ छाप; कसले गर्‍यो एमालेमा अन्तर्घात? स्थानीय सरकारको चुनावमा हार बेहोर्नुपरेपछि एमालेका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ता मात्रै होइन, केन्द्रीय नेता पनि ‘अन्तर्घात’ गरेको भन्दै एक-अर्काबीच आरोप-प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्।
स्थानीय सरकारमा कुन दलका कति जनप्रतिनिधि? स्थानीय तह निर्वाचन सकिएको छ। वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणनाको अन्तिम परिणाम लगभग आइसकेको छ।
स्थानीय तहमा ३८५ स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित स्थानीय तहको निर्वाचनमा ३८५ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन्।
पोखराका मेयर आचार्यसँग आयोगले माग्यो स्पष्टीकरण पोखरा महानगरका नवनिर्वाचित मेयर धनराज आचार्यसँग निर्वाचन आयोगले २४ घण्टे स्पष्टीकरण मागेको छ।
पाँच वर्षअघि मधेशमा एमालेभन्दा पनि बलियो देखिएको माओवादी यस पटकको स्थानीय चुनावमा भने खुम्चिएर चौथो नम्बरमा पुगेको छ।
बालेनको प्रतिबद्धताः काठमाडौंलाई विश्वकै उत्कृष्ट र सुन्दर शहर बनाउनेछौं काठमाडौं महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले काठमाडौंलाई विश्वकै उत्कृष्ट र सुन्दर शहर बनाउने बताएका छन्।